बिन्दास पाठक | Infomala
बिन्दास पाठक / विचार
- पंचम अधिकारी मुलुकमा चुनावको हावा लागेको छ र मेरो भाइ भने ‘राइट टु रिजेक्ट’ मागिरहेको छ । ऊ भन्छ- ‘नत्र भोट हाल्न बुथमा पनि जान्न ।’ ‘चुनावमा भोट नहालेर के गर्छस् त ?’ मैले सोधेँ । ‘केही गतिलो काम’, उसले भन्यो । ‘जस्तो कि, घरमा बसेर गीत सुने भो वा हजुरआमाको कपाल रंगाइदिए भो । केही उपती त हुन्छ…
Comments Off on लोकतन्त्रको लोकलाज
आख्यान / पुस्तक / बिन्दास पाठक / साहित्य
दीपक राना सिद्धार्थको तीन सन्तान मध्येको सबैभन्दा जेठो छोरो हो । १९ वर्षको उमेरमै सहरका नामूद उद्योगपतिका छोराछोरीसँग उस्को बाक्लो हिमचिम भयो । छोराको साथीसँगाती देख्दा सिद्धार्थ छक्क प‍र्‍यो । एकाध वर्षपछि उसले असलियत बुझ्दैछ । ती धनी बाबुका छोराछोरी दीपकसँग नजिकिएका, रत्तिएका त उसको साथमा भैरहने जडीबुटीले पो रहेछ ! “मान्छे एक जूनी जिउँछ । मस्ती गर्नुपर्छ”, दीपकले भन्यो…
Comments Off on उफ्! युरोपमा हुर्केका केटाकेटी …
आख्यान / बिन्दास पाठक / साहित्य
कथा ♦ पंचम अधिकारी ♦ सुविनलाई अत्यन्त हतारो थियो । यसै पनि बाहिर जाने भनेपछि उसका खुट्टा खरायोका जस्ता हुन्थे । डेढ महिना छोटो समय होइन । समुद्र जाँदा, बास्केटबल खेल्दा, साइक्लिंग गर्दा, नेचर हाइक जाँदा, पौडी खेल्दा जेजसो गर्दाका निम्ति होस् तदनुसारका उसका पोशाक थिए । सि.डी., किताब, रंगीन कलमहरू र चुनिन्दा खेलौनाहरू छुटाउनु हुन्थेन । ती सबै कोच्दा बडेमानका तिन…
Comments Off on सानो सेक्रेट
को हाै तिमी ? मनकी रानी की कमारी ?
आख्यान / बिन्दास पाठक
कथा ♦ पंचम अधिकारी♦ दक्षिणी ब्रसेल्सको त्यो पार्कमा जाँदा सुनिता सुर्ताले सिट्ठी थिई । त्यही पार्क, जसले उसको दिमागमा धपेडीको घण्टी बजाइरहन्छ । पोखरीको पल्लोपट्टिको व्यस्त पाटोले कहिल्यै आकर्षण गरेन । वल्लोपट्टिको त्यो ठिंग रूखको सामुन्नेको एकांकी सिट सुनिताको अभ्यस्त ठाउँ हो । आज त्यहाँ अर्कै युवती बसिरहेकी छे । देख्दैमा थाहा हुन्छ- ऊ बेबी-सिटर हो । नजिकै उभिएको केटो…
Comments Off on तिम्रो लोग्ने खै ?
कथा पंचम अधिकारी ♦ म एकदम शान्त र लजालु ठिटो हुँ । एकदिन मेरो स्तर उकास्नै पर्‍यो भनेर निश्चय गरेँ । २३ वर्षे उमेरमा कम्प्युटर इन्जिनियर भएर पनि गोज्याङ्ग्रो नाम मैले नै कमाएको थिएँ । पढ्न त पढ्यो तर चतुर भएन, कमाउ जागिर त पायो तर फुर्तिलो भएन, बाउआमाको काखमा हुर्कियो तर संसार चिनेन भनेर मेरा कुरा काट्नेहरू अचाक्ली थिए ।…
Comments Off on लोकल हिरो